Ishayelwe ihlombe iFifa ngengwiji yombandela kolokufelwa kwamathe
USIHLALO weBackpagepix, uJohn Comitis, uvumelana neFifa ngokushaya ingwijikhwebu Isithombe: BACKPAGEPIX
NHLANHLA SITHOLE | June 4, 2020
USIHLALO weCape Town City, uJohn Comitis, odume ngokubeka umbono wakhe ngokungananazi uthi igcagcele esokeni kuye, emva kokuthi iFifa ishaye ungqimphothwe ngomthetho obuzovimbela ukufelwa kwamathe enkundleni.
“Ngikhululekile ukuthi iFifa (International Federation of Football Association) iwuguqulile umqondo wayo ngoba ekugcineni ukuthimisa yinto ongeke ukwazi ukuyilawula.
Njengomdlali omdala, ngiyazi ukuthimisa akuyona into oyenza ngenhloso kodwa kwenzeka ngenxa yisimo esithile umqondo osuke ubhekene nayo,” kusho uComitis owasho zisuka ukuthi akayizwa indaba yalo mthetho.
“Ngiyajabula ukuthi bafinyelele lapha ngoba ubuzodala ukungaboni ngasolinye.”
IFifa ishaye ingwijikhwebu ngombandela wokuthi uma sekuqalwa ukudlalwa ngaphansi kweCovid-19, kumele unompempe amnikeze ikhadi eliphuzi umdlali ofela amathe, ngoba lokho akusavumelekile.
Ekuqaleni kukaMeyi usihlalo wethimba lodokotela kwiFifa, uMichel D’Hooghe, uphakamise ukuthi kuqedwe lo mkhuba ojwayelikile kunobhutshuzwayo, wathi awunakho ukuhlanzeka futhi ungabhebhethekisa igciwane, iCorona.
Lo mbandela wagxekwa kakhulu ngisho umengameli weSafa, uDanny Jordaan watshela Isolezwe ngeSonto ukuthi bazobhalela iFifa bayibonise ngobunzima abaphathi bemidlalo abazobhekana nabo ngokuwumiselela ngesikhathi somdlalo.
NgoLwesithathu usihlalo wekomiti elibhekene nezindaba zonompempe kwiFifa uPierluigi Collina, ubhalele izinhlangano ezingamalungu eFifa wathi ngeke onompempe besakwazi ukubeka abadlali icala ngokufela amathe ngoba kuzoba nzima ukwelusa bonke abadlali enkundleni abasuke befela amathe.
“Le ndlela yokufela ayingeni esigabeni esilawula imidlalo ngakho kuzokuba nzima ukunikeza ikhadi eliphuzi ngoba kuzokuba nzima kunompempe ukubamba labo abafela amathe noma yikuphi enkundleni.
Ikakhulu lapho ibhola lingekho khona njengoba ngokujwayelekile abadlali bafela amathe kuyona yonke indawo enkundleni njengoba besuke bengena ezikhaleni,” kuchaza isitatimende seFifa.
Ngaleyo ndlela iFifa ikushiyele abagqugquzeli bemidlalo ukuthi benze ngokubona kwabo noma basebenzisa ukubuyekeza ukuqoshwa kwemidlalo ukuze babone ukuthi ngabe yibaphi abadlali abafele amathe maqede kube kubona noma babaqondisa izigwegwe.
“Ngakho-ke abafisa ukumiselela umbandela wokufela amathe, ukuqondiswa kwezigwegwe noma ngabe okwaluhlobo luni kufanele kwenziwe abagqugquzeli balowo mqhudelwano noma yilungu lenhlangano ephethe umdlalo webhola emuva komdlalo,” kusho iFifa esitatimendeni.